गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीतर्फका मन्त्री बाहिरीने निर्णय, मुख्यमन्त्री गुरुङ कति सुरक्षित ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीतर्फका मन्त्री बाहिरीने निर्णय, मुख्यमन्त्री गुरुङ कति सुरक्षित ?
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादीतर्फका मन्त्री बाहिरीने निर्णय, मुख्यमन्त्री गुरुङ कति सुरक्षित ?
चैत २५ गते, २०७७ - १३:४०
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरिने निर्णयसंगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ संकटमा पर्ने देखिन्छन् । माओवादी संसदीय दलको बुधबार विहान बसेको बैठकले दुवै मन्त्रीलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएपछि माओवादी केन्द्रका दुई मन्त्रीले राजिनामा दिन लागेका हुन् ।
दलको बैठकले तत्काल गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएर नयाँ सरकार बनाउन समीकरणका लागि प्रयास गर्ने निर्णय गरेको थियो । पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेख बहादुर थापा रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीलाई गुरुङलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।
मनाङबाट स्वतन्त्र चुनाव जितेका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई रहेकोले गरुङको पक्षमा २८ सांसद रहेका छन् । सरकार बचाउनका लागि एमालेलाई थप ३ सांसदको आवश्यकता पर्छ । माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा गुरुङले सरकार टिकाउनको लागि राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ आवश्यक रहेको छ ।
चैत २५ गते, २०७७ - १३:४० मा प्रकाशित